(c2h5) 2nh diethylamine naxaas (ii) xabagta acetaldehyde copper biyaha
(dd) (rnn) (dd) (rnn) (lng)
(xoog leh) (xoog leh) (D) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3CHO (acetaldehyde) iyo Cu (naxaasta) iyo H2O (biyaha)?
C2H5OH waxay kaga falcelisaa CuO
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cu (copper(ii) oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu (naxaas) badeecad ahaan?
C2H5OH + CH3COOH ↔ H2O + CH3COOC2H5
(c2h5) 2nh diethylamine etanoic acid biyaha
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C2H5OH + CH3COOH → H2O + CH3COOC2H5
Waa maxay xaaladda falcelinta ee C2H5OH ((c2h5)2nh diethylamine) la falgasha CH3COOH (ethanoic acid)?
Heerkulka: 140 ° C Xalka: xooga saaray H2SO4
Ku rid khamriga ethyl, acetic acid tuubada tijaabada A, ku dar xoogaa ururin sulphic acid ah sida kiciyaha, ku kari isku dar tuubada tijaabada A in mudo ah, ka dibna jooji karkarinta, ku dar biyo xoogaa dareeraha isku dhafan ee tuubada tijaabada B, si tartiib ah u rux oo u fiirso
Dhacdada ka dib C2H5OH ((c2h5)2nh diethylamine) waxay la falgashaa CH3COOH (ethanoic acid)
Acetic acid waxay la falgashaa aalkolada ethyl si loo sameeyo ethyl acetate
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C2H5OH + CH3COOH → H2O + CH3COOC2H5
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (ethanoic acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOC2H5 (ethanoic acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOC2H5 () badeecad ahaan?
3C2H5OH + PCl3 → H3PO3 + 3C2H5Cl
(c2h5) 2nh diethylamine fosfooraska foloraydh fosforous acid
3 1 1 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3C2H5OH + PCl3 → H3PO3 + 3C2H5Cl
Waa maxay xaaladda falcelinta ee C2H5OH ((c2h5)2nh diethylamine) ay la falgasho PCl3 (phosphorus trichloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H3PO3 (phosphorous acid) iyo C2H5Cl ()?
Dhacdada ka dib C2H5OH ((c2h5)2nh diethylamine) waxay la falgashaa PCl3 (phosphorus trichloride)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga C2H5Cl, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda PCl3 (fosfooraska trichloride), oo baaba'aya
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3C2H5OH + PCl3 → H3PO3 + 3C2H5Cl
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta PCl3 (phosphorus trichloride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee PCl3 (phosphorus trichloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh PCl3 (phosphorus trichloride) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta H3PO3 (phosphorous acid)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H3PO3 (phosphorus trichloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H3PO3 (phosphorous acid) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee C2H5Cl (phosphorus trichloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C2H5Cl () badeecad ahaan?
C2H5OH + CH3COOH → H2O + CH3COOC2H5
(lng) (lng) (lng)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda CH3COOH (ethanoic acid), waa la waayey
3C2H5OH + 2CrO3 → 3CH3CHO + 3H2O + Cr2O3
(c2h5) 2nh diethylamine trioxide chromium acetaldehyde biyaha chromium (iii) oksaydh
(lng) (rnn) (lng) (lng) (rnn)
(xoog leh) ( thẫm ) (xoog leh) (xoog leh) (xanh thẫm)
3 2 3 3 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3C2H5OH + 2CrO3 → 3CH3CHO + 3H2O + Cr2O3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee C2H5OH ((c2h5)2nh diethylamine) ee uu la falgalo CroO3 (chromium trioxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3CHO (acetaldehyde) iyo H2O (biyaha) iyo Cr2O3 (chromium(iii) oxide)?
Dhacdada ka dib C2H5OH ((c2h5)2nh diethylamine) waxay la falgashaa Cro3 (chromium trioxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Cr2O3 (chromium (iii) oksaydh), oo ka muuqda dhamaadka jawaab celinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Cro3 (chromium trioxide), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3C2H5OH + 2CrO3 → 3CH3CHO + 3H2O + Cr2O3
Su'aalaha la xidhiidha falceliska Cro3 (chromium trioxide)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cro3 (chromium trioxide)? Waa maxay falcelisyada kiimikaad ee leh CroO3 (chromium trioxide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3CHO (chromium trioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3CHO (acetaldehyde) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (chromium trioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Cr2O3 (chromium(iii) oxide)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cr2O3 (chromium trioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cr2O3 (chromium(iii) oxide) alaab ahaan?